Pebble ga-aga n'ihu na-akwado ngwaọrụ ya n'afọ ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Pebble ga-aga n'ihu na-akwado ngwaọrụ ya n'afọ ọzọ
Zụta Pebble site na Fitbit abụwo ihe siri ike nye ndị ọrụ ahụ niile bụ ndị tụkwasịrị ụlọ ọrụ ahụ obi n'oge na-adịbeghị anya. Enwere m ike ịkụ nzọ ọtụtụ afọ gara aga na ụlọ ọrụ ahụ na-azụta Pebble Steel, ngwaọrụ nke taa ma n'agbanyeghị oke ike ya ka bụ ihe nlereanya nke na-arụ ọrụ dịka ụbọchị mbụ. Buru n’uche nke ahụ Pebbles na-adabere na ụlọ ahịa ngwa dị site na ngwa na-enye anyị ohere ijikwa ha. Storeslọ ahịa ndị a jupụtara na ngwa nke na-enye anyị ohere ịbawanye ọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ngwa nke atọ bụ ihe dị mkpa maka ngwaọrụ ọ bụla iji nwee ihe ịga nke ọma n'ahịa ma ọtụtụ ndị mmepe bụ ndị họọrọ Pebble, ndị mmepe amalitela ịkwụsị ịkwụsị mmelite ha, n'ihi na ha ga-anwụ n'oge na-adịghị anya. Obere okwute mara ọkwa maka afọ na-esote, ụlọ ọrụ ahụ ga-anọgide na-enye nkwado maka ndị ọrụ ahụ niile Ha tụkwasịrị ụlọ ọrụ ahụ obi, gụnyere ịgba ọsọ na Pebble Store, mana ọ bụ obere ihe ọzọ. O yikarịrị ka tupu njedebe nke afọ na-esote, Fitbit ga-akwụ ụgwọ ụlọ ahịa a n'ụzọ zuru ezu, na-ahapụ ndị ọrụ niile nke smarwatches ndị a na-enweghị nkwado na ịba uru.
Fitbit ga-edebe ngwà ahụ na mbara igwe ebe ọ dị (iOS na gam akporo) yana ọrụ n'ime 2017. Iji doo anya, ngwaọrụ Pebble agaghị abụ ngwaọrụ na-abaghị uru na enweghị ọrụ. Ngwaọrụ niile iji mepụta ngwa maka usoro okike a, yana mmelite femụwe, ga-anọgide na-adị ndị ọrụ niile.
Oge ga - agwa ma Pebble nwere ike ịnapụta ọkwa a ma ọ bụ ma ọ bụrụ na, na ntụle, mgbe ire, enen, Pebble ga-adịgide adịgide ala ndị ìsì na ihe nile nke a gụnyere, ọrụ gụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Pebble ga-aga n'ihu na-akwado ngwaọrụ ya n'afọ ọzọ
Nke a abụrụla nke a na-achọkarị na Google n'oge 2016
Microsoft Edge ga-egbochi Flash na mmelite na-esote